Monhyɛ Gyidi a Mowɔ Wɔ Nea Mo Ani Da So no Mu Den | Adesua
“Gyidi ne awerɛhyem a yɛde twɛn biribi a yɛn ani da so.”—HEB. 11:1.
NNWOM: 81, 134
Dɛn na Yehowa asomfo a wɔtenaa ase tete no yɛe a ɛmaa wɔn gyidi kɔɔ so yɛɛ den?
Nneɛma bɛn na yɛwɔ a yɛde hyɛ yɛn gyidi den?
Sɛ yɛn gyidi yɛ den a, mfaso bɛn na yebenya?
1, 2. (a) Nsonsonoe bɛn na ɛwɔ nea nokware Kristofo ani da so ne nea nnipa a wɔwɔ Satan wiase no mu ani da so no mu? (b) Nsɛmmisa a ɛho hia bɛn na yɛrebesusuw ho?
NOKWARE Kristofo wɔ anidaso a ɛso bi nni! Sɛ wɔasra yɛn oo, sɛ yɛka “nguan foforo” no ho oo, yɛn nyinaa hwɛ kwan sɛ yebehu Onyankopɔn mfitiase atirimpɔw no mmamu ne Yehowa din ho a wɔbɛtew. (Yoh. 10:16; Mat. 6:9, 10) Weinom ne nneɛma a ɛho hia sen biara a obi betumi ahwɛ kwan. Yɛrehwɛ kwan denneennen nso sɛ yɛn nsa bɛka akatua a Onyankopɔn ahyɛ ho bɔ a ɛne daa nkwa no. Ebinom benya wɔn de wɔ “ɔsoro foforo” no mu, na ebinom nso anya wɔn de wɔ “asase foforo” no so. (2 Pet. 3:13) Enkosi saa bere no, yɛhwɛ kwan sɛ Onyankopɔn bɛkɔ so aboa ne nkurɔfo na wakyerɛ wɔn kwan.
2 Nnipa a wɔwɔ Satan wiase no mu nso wɔ anidaso bi, nanso wɔn adwene nsi wɔn pi sɛ wɔn nsa bɛka nea wɔrehwɛ kwan no. Sɛ nhwɛso no, nnipa ɔpepem pii hwɛ kwan sɛ wobedi loto, nanso wɔrentumi nka nsi so pi sɛ wobedi. Gyidi mapa nte saa. Ɛno de, ɛyɛ “awerɛhyem a yɛde twɛn” Kristofo anidaso no. (Heb. 11:1) Nanso ebia wubebisa sɛ, obi bɛyɛ dɛn anya awerɛhyem a ɛte saa? Sɛ wohyɛ gyidi a wowɔ wɔ nea w’ani da so no mu den a, mfaso bɛn na wubenya?
3. Nokwasɛm bɛn na nokware Kristofo gyidi gyina so?
3 Yɛyɛ abɔnefo, enti yɛn mu biara nni hɔ a wɔde gyidi wo yɛn. Saa ara nso na ɛnyɛ biribi a yenya bere a yɛrenyin. Sɛ obi benya Kristofo gyidi a, gye sɛ obue ne koma mu ma Onyankopɔn honhom kronkron yɛ mu adwuma. (Gal. 5:22) Bible nka sɛ Yehowa wɔ gyidi anaasɛ ohia gyidi. Esiane sɛ Yehowa yɛ ade nyinaa so tumfoɔ na ɔyɛ nyansa nyinaa wura nti, biribiara ntumi nsiw n’atirimpɔw a ɔbɛma abam kwan. Yɛn soro Agya no nim sɛ nneɛma pa a wahyɛ ho bɔ no nyinaa bɛbam, enti ɔka ho asɛm te sɛ nea abam dedaw. Ne saa nti, ɔka sɛ: “Anya aba mu!” (Kenkan Adiyisɛm 21:3-6.) Kristofo gyidi gyina nokwasɛm bi so. Ɛno ne sɛ, Yehowa yɛ “Onyankopɔn nokwafo,” na ɔma ne bɔhyɛ bam bere nyinaa.—Deut. 7:9.
MOMMA YENSUASUA TETEFO A WƆSOM YEHOWA NO GYIDI
4. Mmarima ne mmea anokwafo a wɔtenaa ase ansa na Kristo reba no, anidaso bɛn na na wɔwɔ?
4 Wɔabobɔ mmarima ne mmea 16 a na wɔwɔ gyidi din wɔ Hebrifo nhoma no ti 11. Honhom kaa nea ɔkyerɛw Hebrifo nhoma no ma ɔkaa saa nnipa 16 yi ne afoforo pii ho asɛm sɛ, “wɔn gyidi dii wɔn ho adanse.” (Heb. 11:39) Ná wɔn nyinaa wɔ “awerɛhyem” sɛ Onyankopɔn bɛma ‘aseni’ a wɔhyɛɛ ne ho bɔ no aba abɛsɛe nea Satan atuatew no de aba, na wama Yehowa mfitiase atirimpɔw no abam. (Gen. 3:15) Ansa na Yesu Kristo a ɔyɛ ‘aseni’ a wɔhyɛɛ ne ho bɔ no reba abebue ɔsorokɔ ho kwan no, na saa anokwafo no awuwu. (Gal. 3:16) Nanso, esiane sɛ Yehowa bɔhyɛ bam bere nyinaa nti, wobenyan wɔn aba paradise asase so, na awiei koraa no, wɔakɔ pɛyɛ mu.—Dw. 37:11; Yes. 26:19; Hos. 13:14.
5, 6. Dɛn na Abraham ne n’abusua de wɔn ani too so, na dɛn na wɔyɛe a ɛma wɔkɔɔ so kuraa wɔn gyidi mu denneennen? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
5 Hebrifo 11:13 ka nnipa bi a wɔtenaa ase ansa na Kristo reba ho asɛm sɛ: “Gyidi mu na saa nnipa yi nyinaa wuwui a wɔanhu bɔhyɛ ahorow no mmamu, nanso wohui wɔ akyirikyiri gye toom.” Saa nnipa no mu baako ne Abraham. Yemmisa sɛ, anidaso a ɛne sɛ asetena bɛyɛ anigye wɔ ‘aseni’ a wɔhyɛɛ ne ho bɔ no nniso ase no, Abraham ma ɛtenaa n’adwenem anaa? Yesu maa saa asɛmmisa yi ho mmuae a emu da hɔ. Ɔka kyerɛɛ wɔn a na wɔsɔre tia no no sɛ: “Mo agya Abraham dii anidaso a na ɔwɔ sɛ obehu me da no mu ahurusi, na ohu dii ahurusi.” (Yoh. 8:56) Saa ara na Sara, Isak, Yakob, ne afoforo pii nso hwɛɛ Ahenni a “ne kyekyefo ne ne yɛfo ne Onyankopɔn” no kwan.—Heb. 11:8-11.
6 Dɛn na ɛmaa Abraham ne n’abusua gyidi kɔɔ so yɛɛ den? Ɛbɛyɛ sɛ wotiee anokwafo a wɔn mfe akɔ anim asɛm, Onyankopɔn ma wonyaa anisoadehu, anaasɛ wɔkenkan tete nkyerɛwee a ɛka nokwasɛm, na ɛno ma wosuaa Onyankopɔn ho ade pii. Nea ɛho hia sen biara no, wɔamma wɔn werɛ amfi nneɛma a na wɔasua no, na mmom wɔmaa wɔn ani gyee Onyankopɔn bɔhyɛ ne n’ahwehwɛde ahorow ho, na wodwinnwen ho. Esiane sɛ na saa mmarima ne mmea yi gye di paa sɛ nea wɔn ani da so no bɛbam nti, na wɔasi wɔn bo sɛ, sɛ wohyia amanehunu mpo a, wɔbɛkɔ so adi Onyankopɔn nokware.
7. Dɛn na Yehowa ayi ne yam de ama yɛn a ɛbɛboa yɛn ama yɛn gyidi ayɛ den, na dɛn na ɛsɛ sɛ yɛde saa nneɛma no yɛ?
7 Yehowa ayi ne yam ama yɛn nsa aka n’Asɛm Bible no sɛnea ɛbɛboa yɛn ama yɛn gyidi akɔ so ayɛ den. Sɛ yebenya “anigye” na ‘awie yɛn yiye’ a, ɛsɛ sɛ yɛkenkan Onyankopɔn Asɛm no bere nyinaa. Sɛ ɛbɛyɛ yiye a, ɛsɛ sɛ yɛkenkan no da biara da. (Dw. 1:1-3; kenkan Asomafo Nnwuma 17:11.) Afei, ɛsɛ sɛ yesuasua Yehowa asomfo a wɔtenaa ase ansa na Kristo reba no. Saa ara nso na ɛsɛ sɛ yedwinnwen Onyankopɔn bɔhyɛ ahorow ho, na yɛyɛ nneɛma a ɔhwehwɛ fi yɛn hɔ. Yehowa nam “akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no so ma yɛn honhom fam aduan pii. (Mat. 24:45) Sɛ yɛkyerɛ honhom fam aduan a Yehowa ma yɛn nsa ka no ho anisɔ a, yɛbɛyɛ sɛ tetefo a wɔsom Yehowa a na wɔwɔ ‘awerɛhyem a wɔde twɛn’ Ahenni ho anidaso no.
8. Ɔkwan bɛn so na mpaebɔ hyɛ yɛn gyidi den?
8 Ade foforo nso a ɛboae paa maa adansefo a wɔtenaa ase ansa na Kristo reba no gyidi kɔɔ so yɛɛ den ne mpaebɔ. Bere a wohui sɛ Onyankopɔn tie wɔn mpaebɔ no, wɔn gyidi yɛɛ den. (Neh. 1:4, 11; Dw. 34:4, 15, 17; Dan. 9:19-21) Yɛn nso yebetumi de yɛn haw ato Yehowa anim na yɛanya ahotoso sɛ obetie yɛn na wahyɛ yɛn den ma yɛde anigye agyina yɛn haw ano. Sɛ yenya yɛn mpaebɔ ho mmuae a, ɛhyɛ yɛn gyidi den. (Kenkan 1 Yohane 5:14, 15.) Gyidi ka honhom aba no ho, enti ehia sɛ ‘yɛkɔ so bisa’ Onyankopɔn honhom kronkron sɛnea Yesu kae sɛ yɛnyɛ no.—Luka 11:9, 13.
9. Sɛ yɛrebɔ mpae a, henanom nso na ɛsɛ sɛ yɛbɔ bi ma wɔn?
9 Sɛ yɛbɔ Onyankopɔn mpae a, ɛnsɛ sɛ yɛsrɛ nea yɛn nkutoo hia. Yehowa ‘anwonwadwuma’ a yebetumi ada n’ase na yɛayi no ayɛ wɔ ho da biara da no ‘dɔɔso sen nea yebetumi akan’! (Dw. 40:5) Ɛsɛ sɛ ɛda adi wɔ yɛn mpaebɔ mu nso sɛ, ‘yɛkae wɔn a wɔde wɔn agu afiase no te sɛ nea yɛne wɔn na ɛda afiase.’ Afei nso, ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae ma yɛn nuanom a wɔwɔ wiase nyinaa, ne titiriw, ‘wɔn a wodi yɛn anim’ no. Sɛ yehu sɛ Yehowa atie yɛn mpaebɔ a, ɛka yɛn koma paa!—Heb. 13:3, 7.
WOKURAA WƆN MŨDI MU
10. Onyankopɔn asomfo bɛn na wokuraa wɔn mũdi mu, na dɛn na ɛhyɛɛ wɔn den ma wɔyɛɛ saa?
10 Ɔsomafo Paulo kaa sɔhwɛ ahorow a Onyankopɔn asomfo pii a wammobɔ wɔn din faa mu ho asɛm wɔ Hebrifo ti 11. Sɛ nhwɛso no, ɔsomafo no kaa mmea gyidifo bi a wɔn mmabarima wuwui na akyiri yi wɔn nsa kaa wɔn denam owusɔre so ho asɛm. Ɔsan kaa afoforo ho asɛm sɛ, “wɔyɛɛ wɔn ayayade na wɔanhwehwɛ ogye, na ama wɔanya owusɔre a eye kyɛn so.” (Heb. 11:35) Ɛwom sɛ yentumi nkyerɛ wɔn a na wɔn ho asɛm wɔ Paulo adwenem de, nanso wosiw ebinom te sɛ Nabot ne Sakaria abo kum wɔn. Onyankopɔn asɛm a wotiei ne n’apɛde a wɔyɛe nti na wokum wɔn. (1 Ahe. 21:3, 15; 2 Be. 24:20, 21) Ɛda adi pefee sɛ, na hokwan wɔ hɔ sɛ Daniel ne ne mfɛfo no begyae wɔn mũdi mu na ‘wɔahwehwɛ’ ogye, nanso wɔanyɛ saa. Mmom, esiane sɛ na wogye di sɛ Onyankopɔn wɔ tumi nti, sɛ yɛbɛka a, ‘wosiw agyata ano,’ na ‘wodwudwoo ogya ano.’—Heb. 11:33, 34; Dan. 3:16-18, 20, 28; 6:13, 16, 21-23.
11. Sɔhwɛ ahorow bɛn na adiyifo bi hyiae a wɔn gyidi nti wotumi gyinaa ano?
11 Adiyifo te sɛ Mikaia ne Yeremia gyidi nti ‘wonyaa sɔhwɛ denam fɛwdi ne afiasenna so.’ Afoforo te sɛ Elia nso kyinkyin “sare so ne mmepɔw so ne abodan ne asase so abɔn mu.” Esiane sɛ na wɔn nyinaa wɔ ‘awerɛhyem a wɔde retwɛn biribi a wɔn ani da so’ nti, wokuraa wɔn mũdi mu.—Heb. 11:1, 36-38; 1 Ahe. 18:13; 22:24-27; Yer. 20:1, 2; 28:10, 11; 32:2.
12. Hena na ɔyɛɛ yɛn mũdi mu a yebekura wɔ sɔhwɛ mu ho nhwɛso a ɛsen biara, na dɛn na ɛboaa no ma ɔyɛɛ saa?
12 Bere a Paulo kaa mmarima ne mmea gyidifo bi ho asɛm wiei no, ɔtwee adwene sii nea ɔyɛɛ gyidi ho nhwɛso a ɛsen biara no so. Ɔno ne yɛn Awurade Yesu Kristo. Hebrifo 12:2 ka sɛ: “Anigye a na ɛda n’anim nti, ohuu asɛndua ho amane, buu n’ani guu aniwu so, na wakɔtena Onyankopɔn ahengua no nifa.” Nokwasɛm ne sɛ, gyidi a Yesu daa no adi bere a ohyiaa sɔhwɛ a emu yɛ den sen biara no, ɛsɛ sɛ ‘yesusuw ho yiye.’ (Kenkan Hebrifo 12:3.) Tete Kristofo a wɔn gyidi nti wokunkum wɔn no kuraa wɔn mũdi mu kosii ase sɛnea Yesu yɛe no. Wɔn mu baako ne osuani Antipa. (Adi. 2:13) Saa tete Kristofo no anya wɔn akatua dedaw. Wɔanyan wɔn afi awufo mu ma wɔkɔ soro. Wɔn wusɔre no sen “owusɔre a eye kyɛn so” a na gyidifo a wɔtenaa ase tete no hwɛ kwan no. (Heb. 11:35) Bere a wɔde Ahenni no sii hɔ wɔ afe 1914 akyi no, wonyanee anokwafo a wɔasra wɔn a na wɔadeda wɔ owu mu no nyinaa ma wɔkɔɔ soro kɔkaa Yesu ho ma wɔne no redi adesamma so hene.—Adi. 20:4.
WƆN A WƆAYƐ GYIDI HO NHWƐSO WƆ YƐN BERE YI SO
13, 14. Sɔhwɛ ahorow bɛn na Rudolf Graichen hyiae, na dɛn na ɛboaa no ma ogyinaa ano?
13 Onyankopɔn asomfo ɔpepem pii resuasua nhwɛso a Yesu yɛe no wɔ yɛn bere yi so. Wɔmma wɔn werɛ mmfi anidaso a wɔwɔ no, na wɔmma sɔhwɛ ahorow nso nnsɛe wɔn gyidi. Momma yɛnhwɛ Rudolf Graichen a wɔwoo no wɔ Germany wɔ afe 1925 no. Ne werɛ amfi Bible mu nsɛm ho mfonini bi a na ɛtetare wɔn dan mu no. Ɔkyerɛwee sɛ: “Mfonini no baako yɛ pataku ne oguammaa, ɔsebɔ ne abirekyi ba, nantwi ba ne gyata a wɔn nyinaa te faako wɔ asomdwoe mu, na abarimaa ketewaa bi na na ɔreka wɔn. . . . Me werɛ amfi mfonini ahorow a ɛte saa no da.” (Yes. 11:6-9) Rudolf hyiaa ɔtaa a emu yɛ den mfe pii. Nasi Gestapo anaa sum ase polisifo dii kan taa no, na akyiri yi East Germany Komunis Stasi anaa sum ase polisifo nso taa no. Nanso, ɔkɔɔ so kuraa gyidi a na ɔwɔ sɛ asase bɛdan paradise no mu pintinn.
14 Rudolf hyiaa sɔhwɛ foforo a emu yɛ den nso. Yare bi a ɛte sɛ atiridiinini kum ne maame wɔ Ravensbrück nneduaban mu. Saa ara nso na ne papa gyidi yɛɛ mmerɛw ma ɔde ne nsa hyɛɛ krataa ase de kyerɛe sɛ ɔnyɛ Yehowa Dansefo bio. Bere a woyii Rudolf fii afiase no, ɔbɛyɛɛ ɔmansin sohwɛfo, na akyiri yi, wɔtoo nsa frɛɛ no ma ɔkɔɔ Gilead Sukuu. Wɔma ɔkɔyɛɛ ɔsɛmpatrɛwfo wɔ Chile, na ɛhɔ nso ɔsomee sɛ ɔmansin sohwɛfo. Nanso, na Rudolf sɔhwɛ ahorow no nnya mmaa awiei. Ɔwaree onuawa ɔsɛmpatrɛwfo bi a wɔfrɛ no Patsy. Afe baako akyi no, wɔn babea kumaa wui. Akyiri yi, ne yere a ɔdɔ no no nso wui bere a na wadi mfe 43 pɛ. Rudolf kuraa ne mũdi mu wɔ sɔhwɛ ahorow yi nyinaa mu. Bere a n’asetenam nsɛm baa August 1, 1997, Ɔwɛn-Aban mu wɔ kratafa 20-25 no, na ne mfe akɔ anim, na na ɔnte apɔw, nanso na ɔresom sɛ daa kwampaefo ne asafo mu panyin. 
15. Yehowa Adansefo a wɔretaa wɔn seesei nanso wɔde anigye resom Yehowa no bi ne henanom?
15 Ɛwom sɛ wɔretaa Yehowa Adansefo denneennen de, nanso wokura wɔn anidaso mu pintinn. Nhwɛso bi ni. Wɔde yɛn nuanom mmarima ne mmea pii agu afiase wɔ Eritrea, Singapore, ne South Korea. Mpɛn pii no, nea enti a wɔyɛ wɔn saa ne sɛ wodi Yesu asɛm a ɛne sɛ ɛnsɛ sɛ yɛtwe nkrante no so. (Mat. 26:52) Anuanom ɔhaha pii a wɔde wɔn agu afiase no bi ne Isaac, Negede, ne Paulos. Wɔde wɔn agu afiase wɔ Eritrea bɛboro mfe 20 ni! Wonnyaa hokwan nwaree, na saa ara nso na wontumi nhwɛ wɔn awofo a wɔn mfe rekɔ anim no. Ɛwom sɛ wɔayɛ saa anuanom yi ayayade de, nanso wɔakɔ so akura wɔn mũdi mu. Sɛ wuhu sɛnea wɔn anim yɛ sereserew wɔ yɛn wɛbsaet, jw.org so no a, wuhu sɛ wɔn gyidi da so ara yɛ den. Afiase ahwɛfo no mpo abenya obu ama wɔn.
Wɔn a wɔayɛ gyidi ho nhwɛso wɔ yɛn bere yi so a wɔwɔ w’asafo mu no, worenya wɔn suahu so mfaso anaa? (Hwɛ nkyekyɛm 15, 16)
16. Sɛ wo gyidi yɛ den a, ɔkwan bɛn so na ebetumi abɔ wo ho ban?
16 Yehowa nkurɔfo dodow no ara nhyiaa ɔtaa a emu yɛ den da. Wɔn gyidi ho sɔhwɛ a wɔahyia gu ahorow. Ebinom adi ohia buruburoo anaa wɔahu amane wɔ ɔmanko anaa atoyerɛnkyɛm mu. Afoforo nso ayɛ wɔn ade te sɛ Mose ne tete agyanom binom. Wɔagyae wiase nneɛma anaa edin a wobegye akyi di. Wɔayere wɔn ho paa sɛ wɔremma wiase ahonyade ne pɛsɛmenkominya ntwetwe wɔn adwene. Dɛn na ɛboa wɔn ma wotumi yɛ saa? Ɛyɛ Yehowa ho dɔ ne Yehowa bɔhyɛ ahorow mu gyidi a wɔwɔ. Wogye di paa sɛ Yehowa behyira n’asomfo anokwafo ama wɔanya daa nkwa wɔ wiase foforo a trenee te mu no mu. Saa ara na obeyi asisisɛm nyinaa nso afi hɔ.—Kenkan Dwom 37:5, 7, 9, 29.
17. Dɛn na woasi wo bo sɛ wobɛyɛ, na dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua a edi hɔ no mu?
17 Adesua yi mu no, yɛahu sɛ sɛ yedwinnwen Onyankopɔn bɔhyɛ ahorow ho na yɛbɔ mpae daa a, ɛbɛboa yɛn ma yɛn gyidi akɔ so ayɛ den. Ɛbɛsan aboa yɛn ma yɛatumi agyina yɛn gyidi ho sɔhwɛ ahorow ano. Afei nso, anidaso a yɛwɔ sɛ Kristofo no, ‘yɛde awerɛhyem bɛtwɛn.’ Nanso, sɛ Bible ka gyidi ho asɛm a, ɛkyerɛ nneɛma pii. Yebesusuw ho wɔ adesua a edi hɔ no mu.
^  (nkyekyɛm 14) Hwɛ asɛm a wɔato din “Despite Trials, My Hope Has Remained Bright (Sɔhwɛ a Mahyia Nyinaa Akyi, Makura M’anidaso Mu Pintinn)” nso. Ɛwɔ April 22, 2002, Nyan! Borɔfo de no mu no. Ɛyɛ Andrej Hanák a ofi Slovakia asetenam nsɛm.